Ezona ndlela zingcono zokukhulula isithuba kwi-Android | I-Androidsis
Ezona ndlela zingcono zokukhulula indawo kwifowuni yakho ye-Android
Indawo yokugcina yenye yezona zinto zixhalabisayo kubasebenzisi be-Android. Abasebenzisi bahlala bejonga iindlela zokonga indawo kwaye ngenxa yoko bayisebenzisa kakhulu. Enye yezona zinto zixhaphakileyo kule meko kukhulula isithuba. Sinezindlela ezininzi zokwenza, eziza kusivumela ukuba sibe nendawo yasimahla emnxebeni.
Akunzima ukukhulula indawo kwi-Android. Ngokuqinisekileyo sonke siyenzile ngexesha elithile, nangona kukho iindlela ezahlukeneyo esivumela ukuba sikhulule indawo. Ngesi sizathu, siza kuthetha ngomnye wabo ngokweenkcukacha ezingasezantsi.
1 Khipha usetyenziso
2 Sebenzisa ii -apps zeLite
3 Cima iifoto okanye iifayile
4 Hambisa iiapps kwikhadi le-SD
Esona senzo siqhelekileyo kwaye enye yeyokuqala esiyenzayo xa sifuna ukukhulula indawo kwi-Android, kukuphelisa ezo zicelo esingazisebenzisiyo. Yindlela elula kakhulu yokugcina indawo kwifowuni yakho. Ukuba ifowuni yakho inememori egcweleyo kwaye kufuneka ucime usetyenziso okanye imidlalo, kubalulekile ukuba ukhethe kakuhle ukuba zeziphi ekufuneka zihambile kwaye zeziphi ezingafanelekanga.
Kungenxa yoko, kufuneka siqwalasele ukuba zeziphi izicelo esizisebenzisa rhoqo. Ukuba unesithuba esilinganiselweyo, kuya kufuneka ugcine izinto eziyimfuneko. Ezo zicelo uzisebenzisa yonke imihla, ezinje ngemiyalezo, njl. Abanye kufuneka bahambe, ke ifowuni inokusebenza ngokwesiqhelo kwaye unendawo ethile.
Kule meko, sihlala sinefayile ye- ithuba lokukhuphela usetyenziso olusinceda ukulawula indawo, Kwaye baya kusinceda kule nkqubo. Kodwa ukususa ii -apps kwifowuni yethu ye-Android yinto esinokuzenzela yona.
Sebenzisa ii -apps zeLite
Ixesha elidlulele uninzi lwezicelo zenze iinguqulelo zeLite okanye i-Go (kwimeko yokusetyenziswa kwenkqubo). Lukhetho olutya izixhobo ezimbalwa kwaye luthatha indawo encinci kwifowuni yakho ye-Android. Ke ziyindlela elungileyo yokonga indawo, ngandlela thile ukhulula indawo ngokuzisebenzisa. Nangona bengasoloko besinika yonke imisebenzi yezicelo zoqobo.
Kodwa, ngezi zicelo zeLite sinokwenza ezona ntshukumo ziphambili zisinikwa zezi zicelo. Ke banokuba nokusikelwa umda, kodwa sinokwenza ezona zinto zixhaphakileyo ngazo. Kwaye siya kuyenza nge Isicelo esilula kakhulu esithatha indawo encinci kwifowuni yethu ye-Android.
Simele jonga ukuba singasilanda usetyenziso kwifowuni yethu. Kuba iiGo Go, eziziGoogle, ziyahambelana neefowuni ezisezantsi, ngenxa yoko unokungabinakho ukuyisebenzisa. Ezinye iinguqulelo zeLite zezinye iiapps zihlala zixhaswa.
Cima iifoto okanye iifayile
Elinye inyathelo eliqhelekileyo elifanele ukwenziwa ngamaxesha athile li cima iifoto okanye ezinye iifayile kwifowuni yakho. Rhoqo, sineefayile ezininzi ezigcinwe kwifowuni, kodwa kwiimeko ezininzi aziloncedo kuthi kwaye asizisebenzisi rhoqo. Ke bathatha indawo kwifowuni yethu ngaphandle kwentsingiselo.
Ke kulula ukuba sithathe uhambo kwifolda yefowuni yethu ye-Android. Jonga ukuba kukho naziphi na iifoto okanye iifayile esingazifuniyo. Singasoloko senza ikopi yazo kwaye sizigcine efini, ke sinokubasusa kwifowuni. Ke, siyakwazi ukukhulula indawo ngendlela elula.
Kwezi meko, kulungile ukuba sisebenzisa Iifoto zikaGoogle kwi-Android, ukuze sikwazi ukwenza ukhuphelo lwazo zonke iifoto ngaphambi kokucima nayiphi na. Ke, siqinisekile ukuba asiyi kuphulukana nawo nangaliphi na ixesha. Kuba ayisiyonto ifunwa nangubani na.
Hambisa iiapps kwikhadi le-SD
Ekugqibeleni, Singasoloko sibhenela ekufakweni kwezicelo kwikhadi le-SD. I-Android, kuba inguqulelo yayo engu-6.0, isinika ithuba lokuguqula ikhadi le-SD libe luhlobo lokugcinwa kwangaphakathi. Ukuze sikwazi ukuhambisa usetyenziso kuyo ngaphandle kwengxaki. Inkqubo ngokwayo ayimangalisi kakhulu, nangona sinesicelo esiza kusinceda kule meko:
I-AppMgr III iya kusinceda ukuhambisa usetyenziso kwi-SD. Yifake nje kwaye iya kusibonisa ukuba zeziphi iinkqubo esinokuzihambisa ngaphandle kwengxaki. Ungayikhuphela apha:
AppMgr III (usetyenziso 2 SD)
Umthuthukisi: Sam Lu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ezona ndlela zingcono zokukhulula indawo kwifowuni yakho ye-Android
Ungayikhuphela njani ulwazi lweakhawunti yakho yeWhatsApp
Ezona zibalo zibalaseleyo kwiVidiyo kaGoogle